Kungani ukuba ngumtapo wolwazi kungekuhle njengoba kuzwakala | Izincwadi Zamanje
UMaria Ibanez | | Izaziso
Esikhathini esingengakanani esidlule ngifunde ukuthi, ngokocwaningo, oyedwa kwababili baseBrithani ufuna ukuba ngumtapo wolwazi nokuthi lo msebenzi ungowesibili ofunwa kakhulu, ngemuva kwalowo wombhali. Njengomtapo wolwazi ngazibuza lowo mbuzo engangibuzwa wona kaningi ngenkathi ngisebenza eBeijing futhi ngathi engikwenzayo: Ngempela?
Angikaze ngiliqonde ithoni yalowo mbuzo, futhi angazi nakanjani ukuthi ngiyithatha kanjani imininingwane evela kulolo cwaningo. Engingakusho ukuthi umsebenzi wasemtatsheni wezincwadi awupholile njengoba ucabanga.
Othile uzocabanga ngemuva kokufunda lo mholi ukuthi ngivuke emoyeni sineka, kepha ukubona umngcele nabantu engifunda nabo kungiholela ekucabangeni ngalokho okwakusengqondweni yethu sonke esikuleso sithombe ngosuku esabhalisa ngalo kwi-Documentation.
Ukuba ngumtapo wolwazi wukwenza umsebenzi owawuchazwa ngabaseMesopotamiya, ngakho-ke sijwayele ukuba nesikhathi, lokhu kungumthombo wokuziqhenya. Vele, besingayazi le datha lapho siqala.
Kepha ake sifike enhliziyweni yalolu daba ukuthi, njengenjwayelo, ngizungeza ihlathi. Kunezizathu ezimbili zokuthi kungani umuntu ethi ufuna ukuba ngumtapo wolwazi: a) kungumsebenzi othule; b) ukusebenza ngezincwadi.
Kulungile, kuthulekile. Uma uyiqhathanisa nodokotela we-ER, kunjalo. Kepha uma othile elindele ukuhlala esitobhini efunda buthule (okungaphezu kwesithombe eseluliwe somtapo wolwazi) ngaphandle kokuphazanyiswa yinoma ngubani, evuka ngezikhathi ezithile e-oda ezinye izincwadi, bayaphazama.
Ekhawunteni ungaphansi kohambo futhi abasebenzisi bayafika, bathandwa futhi besatshwa ngokwemvelo yabo. Ngakho-ke, noma ngabe bayini, umsebenzi wasemtatsheni wezincwadi akahlali buthule afunde futhi abukele, kufanele asebenzise amakhono akhe kwezenhlalo nawokuphatha ukuze abasize.
Ingatholwa nabasebenzisi abacela izinto ezilula, nazo ezijabulisayo nezinobungane. Kepha kukhona okungabekezeleleki nokuhamba ngezinyawo okucasula usuku lokusebenza kwesiguli kakhulu sochwepheshe.
Icala langempela lokukhombisa lokhu okugcina: umsebenzisi uza kwikhawunta bese ethi kumtapo wolwazi: «INkosi u-Alfonso XIII inikele ngesidlo sakusihlwa eSeville ngeqembu labalingisi ngo-1928. Ngifuna ukwazi imenyu yokudla kwakusihlwa ».
Angikhumbuli ukuthi lelo bekuyilo yini usuku, kepha leso bekuyisicelo. Imenyu yaleso sidlo. Umsebenzi wasemtatsheni wezincwadi okwenzeke kuye wacinga, waze ekugcineni wamcela ngomusa ukuba aye kufayela lapho, uma bengalahlekile, babezoba nedatha kulowo mcimbi.
Ungacabangi ukuthi umsebenzisi ubenobungane, umbize ngokungafaneleki phakathi kwezinye izinto eziningi.
Futhi ngezincwadi sicabanga ngezincwadi nemisebenzi yomcabango: Umlando, ifilosofi, ifilosofi ... futhi kulapha lapho labo bethu abangena emcabangweni wokufunda i-Library Science (igama elibi elingasasetshenziswa), siyamamatheka ngokuzikhukhumeza okuthile kwabafundi bephilologists, izazi-mlando noma izazi zefilosofi ezinquma ukweqa endaweni yethu.
Emtatsheni wezincwadi kukhona konke futhi uma ubhekene nemibuzo ethile akusizi ngalutho ukwazi ngisho nomlobi ongaziwa kakhulu weSizukulwane Sama-50 noma ukwazi ukulandelana okungapheli kwezimpi nokuvukelwa ngekhulu le-XNUMX leSpain.
Ukufanekisa lokhu ngikunikeza elinye icala langempela: edolobheni lami kunomuntu osebenza emtatsheni wezincwadi owathi, ngemuva kokuvala isikhungo sikamasipala lapho ayesebenza khona, bamsusa bamfaka emtatsheni wezincwadi ngoba lo muntu ubhala kahle kakhulu futhi wazi okuningi ngezincwadi. Njengamanje ungumuntu ongagqugquzelwa kakhulu umuntu angamthola emsebenzini futhi uchitha uhhafu wonyaka esekhefini lokugula ngenxa yokudangala.
Umsebenzi womtapo wolwazi ukuphatha isikhungo okufanele siqinisekise ukufinyelela kwezakhamizi kulwazi namasiko, kusuka ezincwadini, ngokusebenzisa izibalo, ubunjiniyela, ifilosofi noma umthetho.
Ngakho-ke umsebenzi womtapo wolwazi, kulabo abafuna ukukwenza ngoba bacabanga ngenye yalezi zindlela, cha, awupholile kangako.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Izaziso » Kungani ukuba ngumtapo wolwazi kungekuhle njengoba kuzwakala
Yebo mama, uyibethele. Ingasaphathwa inkinga yenqubo yezobuchwepheshe ... Mangaki ama-anecdotes esingawasho ngabasebenza emtatsheni wezincwadi abahola izulu? Ngabe ufundile okwabhalwa ngu- @ julianmarquina mayelana nengcindezi yolabhulali? Ngiyabonga okwakho
UMaria Ibanez kusho
Yebo, ngasifunda leso sihloko. Kuhle kakhulu, ikakhulukazi njengoba ebuze ozakwabo kuFacebook. Futhi ngendlela, ngibhalisela konke ekushoyo.
Ngiyabonga kakhulu ngamazwi akho, kuyintokozo ukwazi ukubhala ngomsebenzi omuhle kangaka.
Phendula uMaría Ibáñez
Ngiyavuma ngokuphelele, kodwa noma kunjalo, ngiyawuthanda lo msebenzi, futhi angiwushintsheli kunoma yini.
fan ngokuphelele yengxenye yabasebenzisi neyama-philologists kanye nabasebenzi abakholelwa ukuthi sidla phansi
Futhi ikakhulukazi ukubonakaliswa kwakho kokugcina, uma lokhu kungeyona into yakho, ungangeni, ngoba kudlula wena
Ngiyabonga kakhulu ngokuphawula kwakho, Victor. Ngizwa abantu abaningi bekhuluma ngokuthanda kwabo izincwadi nokuthi yimuphi umsebenzi womtapo wolwazi okungaba ngumsebenzi wabo omuhle. Njengomtapo wolwazi oqeqeshiwe nonolwazi ngacishe ngazizwa ngiphoqelekile ukubhala lo mbhalo.
Vele, lokho akusho ukuthi kungumsebenzi omuhle, kepha kufanele uwubhekisise kahle ukuze ungakhungatheki.
Okuthunyelwe okuhle kakhulu. Yini ongayincoma kudokotela wezifundo zemvelo othi, ngemuva kokuphinda aqeqeshe, ezoqala maduzane ukusebenza njengomsizi womtapo wolwazi futhi oseke wafeza umhlaba wezincwadi wolwazi? Ngiyabonga 🙂